HANAVAO NY ENDRIKY NY OFFICE I MICROSOFT - OFFICE - 2019
Hanavao ny famolavolana programa an'ny Office i Microsoft
Vao haingana, nitatitra fa hivoaka tsy ho ela ireo dikan-teny vaovao amin'ny Word, Excel, PowerPoint, ary Outlook. Rahoviana i Microsoft no hanavao ny rafitra Office, ary inona no fiovana manaraka?
Rahoviana hiandry fiovana
Ny mpampiasa dia afaka manombana ny famolavolana sy ny asan'ny Word, Excel ary PowerPoint vaovao tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity. Amin'ny volana Jolay, hisy ny fanavaozam-baovao Outlook ho an'i Windows, ary amin'ny volana Aogositra, ny dikanteny ho an'i Mac dia homena ny sanda mitovy.
Inona no hampidirin'i Microsoft?
Mikasa ny hampiditra ireto fanavaozam-baovao manaraka ireto ny Microsoft:
Ho lasa "mandroso" kokoa ny milina fikarohana. Ny fikarohana vaovao dia hanome anao ny fahafahana miditra amin'ny informatika, fa koa amin'ny ekipa, olona ary ny votoaty ankapobeny. Ny safidy "Zero fangatahana" dia hampiana, izay, rehefa mampisandratra ny cursor amin'ny sehatry ny fikarohana, dia hanome anao safidy azo tsidihana kokoa mifanaraka amin'ny algorithm AI sy Microsoft Graph;
Hisokatra ny loko sy ny sary. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mahita ny palette vaovao, izay hamolavolaina amin'ny endriky ny sary maitso. Ny mpandraharaha dia matoky fa ity fomba fanavaozana ity dia tsy mamolavola ny programa fotsiny ihany, fa manampy koa ny mamolavola ny fomba famolavolana azy kokoa sy ny fampidirana ho an'ny mpampiasa tsirairay;
Ny vokatra dia hanasongadina valiny anatiny. Izany dia hamorona fifandraisana matanjaka eo amin'ny mpandrindra sy ny mpampiasa mba hizara fampahalalana misimisy kokoa sy ny fahafahana manova.
Ireo mpikirakira dia mitatitra fa hanatsotra ny endriky ny kasety. Ny mpanamboatra dia matoky fa ny hetsika toy izany dia hanampy ny mpampiasa hifantoka kokoa amin'ny asa ary tsy ho variana. Ho an'ireo izay mila filalaovana bebe kokoa fotsiny, hisy fomba hipoitra, izay ahafahanao manongotra azy io amin'ny endriny malaza.
Miezaka ny hanohy ny fandrosoana i Microsoft ary manova ny fandaharam-pampianarany mba hahafahan'ny mpampiasa rehetra hampiasa azy ireo. Manao ny zava-drehetra i Microsoft mba hahafahan'ilay mpanjifa hahavita zavatra bebe kokoa.
https://termotools.com mg.termotools.com © Office 2019